DAAWO: Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo saluugsan qaabka ay u socoto Xaaladda Tukaraq, kuna dhawaaqay fadhi.. – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home 2018 February W.Gudaha, Wararka Maanta DAAWO: Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo saluugsan qaabka ay u socoto Xaaladda Tukaraq, kuna dhawaaqay fadhi..
DAAWO: Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo saluugsan qaabka ay u socoto Xaaladda Tukaraq, kuna dhawaaqay fadhi..
February 13, 2018 |by W LAASCAANO| 2
GAROOWE(P-TIMES)- Mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa horaantii bisha January ee sannadkan guddi gaar ah u saaray xaaladda Tukaraq oo ay qabsadeen ciidamada Somaliland, waxaana xiligaas ay guddigaas ahaayeen kuwa loogu talo-galay la xisaabtam Xukuumada oo dabagal ku sameeya arrimaha socda.
Xildhibaanadii la diray ayaa qeyb ka noqday guddi gaar ah oo loo xilsaaray arrimahan si gaar ahna ula socday dhaqdhaqaaqyada ay waday Xukuumada Puntland.
Mudanayaasha baarlamaanka qaarkood oo aan ka mid aheyn gudiyadaas ayaa dhaliilay habka ay wax ku socdaan, gaar ahaana qaabka ay dawladdu hadda u wajahday xaaladda Tukaraq oo ay sheegeen in ay u muuqato mid aysan ku qanacsaneyn Shacabka mandiqadu.
Xildhibaan Cabdirisaaq Jaamac Cabdi oo kamid ah baarlamaanka ayaa sheegay in qaabka loo wajahay xiisadda iyo xoreynta Sool ay tahay mid aysan ku faraxsaneyn Shacabka, ayna doonayaan in fadhi deg deg ah lays kugu yeero mudanayaasha golaha baarlamaanka Puntland si ay ula xisaabtamaan Xukuumada.
Xildhibaankan wuxuu tilmaamay in dhinacooda ay cadaadis weyn kala kulmayaan waxgaradka iyo Shacabka oo ay wakiil ka yihiin, wuxuuna cadeeyey in ay cadaadis ku saarayaan Xukuumada in ay qaadato doorkeeda hogaamineed.
2 thoughts on “DAAWO: Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo saluugsan qaabka ay u socoto Xaaladda Tukaraq, kuna dhawaaqay fadhi..”
gorad February 14, 2018 at 11:30 am · Edit
xildhimanadan hakaqabateen shaqo gaas waayo uwuxuu uegayahay shaqasi aanbagaranay waxa ay tahay puntland waayo xuudda puntland waa labadi gaatama
Mohamad February 14, 2018 at 11:49 am · Edit
kkkkkkk xaqiiqdii bay soo taabteen oo ah puntland dhulkeedii waa joogtaa haddaan la riyoonayn kkkklkk.